घोराही १६ मा नेकपाकै उम्मेद्वारबिरुद्ध स्व. लछिन बुढाकि धर्मपत्नि लालमती बुढाले बागी उम्मेद्वारी दिने - जागरण अनलाइन
घोराही १६ मा नेकपाकै उम्मेद्वारबिरुद्ध स्व. लछिन बुढाकि धर्मपत्नि लालमती बुढाले बागी उम्मेद्वारी दिने
२०७६ कार्तिक २६, मंगलवार १०:४६
घोराही । नेकपा दाङले घोराही १६ को वडा अध्यक्षको उम्मेद्वार छान्न सकस भएपछि लामो बिबादका बिच वडा अध्यक्षको उम्मेद्वार चयन गरेको छ ।
धेरैलाई घोराही १६ मा बिरामी भएर निधन भएका स्व. लछिन बुढाकि धर्मपत्निलाई वा पुराना नेता गजेन्द्र खड्काले पार्टीबाट वडा अध्यक्षको टिकट पाउने अपेक्षा गरेका थिए । उम्मेद्वार छान्ने बिषयमा नेताहरु बिच बिवाद भएपछि बैठक धेरै पटक सर्दै आएको थियो पार्टी भित्र केपि ओलि समुहका खुलेर लालमतीको पक्षमाा उभिए भने माधब नेपाल समुहका गजेन्द्रको पक्षमा देखिए । सुरुको पार्टीको जिल्ला बैठकमा बहुमत सदस्य गजेन्द्रको पक्षमा देेखिए । केहि
नेताहरु लालमतीको पक्षमा देखिएपछि सहमती जुटाउने भन्दै बैठकबाट त्यो बिषयमा निर्णय हुन सकेन । त्यो सुरुको बैठकमा नेकपाका जिल्ला सचिब र जिल्ला इन्चार्ज पनि लालमतीकै पक्षमा आए । त्यसपछि जिल्ला कमिटि भित्र यो बिषय पेचिलो र गुटको कारण सबैलाई चासोको बिषय बन्यो । तर, दुबै पक्षकोलाई पछि पार्दै नेकपाले पुर्ब माओवादि समुहबाट सुरेश बहादुर केसिलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गर्यो । त्यो निर्णयमा चित्त नबुझेपछि स्व. लछिन बुढाकि धर्मपत्नि लालमतीले पार्टीको निर्णय विरुद्ध बागी उम्मेद्वारी दिने बताइन ।
उनले पार्टीको निर्णय आफुलाइ चित्त नबुझेको भन्दै स्व लछिनको सम्मानका लागि पनि आफुले उम्मेद्वारी दिने बताइन । नेपाल र ओलि समुहको पेचिलो लडाइले पुर्ब माओबदि समुहले नेपाल समुहको साथ लिएर आफ्नो पक्षमा निर्णय गरायो । यो निर्णय र बागी उम्मेद्वारी दिने कुरा सन्चारमाध्यममा आएपछि नेकपा दाङ भित्रको बिवाद छताछुल्ल भएको छ । दाङको सदरमुकाम घोराहि भित्र घोराही १६ मा हुने चुनाबलाई राजनितीकरुपमा अर्थपुर्णरुपमा हेरिएको छ ।